Beddelka ugu fiican ee loo yaqaan 'Tinder' ee 2021 | Androidsis
La kulanka qof gaar ah marwalba waxaa loo arkaa wax aan macquul aheyn. Waxaa jira bogag badan oo shaqeynayay muddo dheer oo ku saleysan oraahyo ay kumanaan dad ah ku gaareen jacayl, wax mararka qaar u muuqda kuwo ku adag jawigeenna maalinlaha ah.
Mid ka mid ah adeegyada ay maamusho si loo ilaaliyo qayb weyn oo ka mid ah guusha ayaa ah Tinder, bog ku mahadsan codsigan ayaa leh malaayiin isticmaaleyaal firfircoon. Maanta way badan yihiin beddelka TinderDhexdooda, qaar badan baa yaqaan bulshada ku hadasha Isbaanishka.
5 Kalluun badan (POF)
9 Joyride - Kulan, Wadahadal iyo Ciyaar
LOVOO waa bedel weyn oo loo maro Jaangooraha, oo leh hawlgal aad u kala duwan, oo la shaqeynaya su'aalo kala duwan si loo dhammaystiro astaanta. Thanks to hawsha CherryPicks, waxay ku tusi doontaa taxane dad ah oo adiga kugu habboon, danaha, dhadhanka iyo macluumaadka la bixiyay.
Waa codsi dhammaystiran oo lagu barto dadka, jinsi ka soo horjeedda ama jinsi isku mid ah, adoo wadaaga waxyaabo badan ama ka duwan. Waqtigan xaadirka ah wuxuu leeyahay fiidiyow LIVE si uu ula xiriiro qofka oo aad qaadatid tallaabo kahor kulanka, ku habboon dadka geesinimada leh.
Waxa ugu weyn ee looga shaqeynayo LOVOO waa in la buuxiyo dhammaan macluumaadka, waxaa sii dheer u soo rarista sawir qaali ah shaashadda illaa inta ay ku baranayaan. Waxay leedahay isku dheelitirro, sheekaysi iyo barafleyno, kii ugu dambeeyay ee aad si toos ah ugu qori kartid qofka soo jiitay dareenkaaga. In ka badan 50 milyan oo soo degsasho ah ayaa codsigu ku yaal Play Store.
LOVOO - App shukaansi & Sheeko
Waa mid ka mid ah bogagga ugu caansan marka ay timaaddo shukaansiga, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, oo ka hawlgala illaa 2006 ee internetka. Waa mid ka mid ah beddelaadaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Tinder'Waxay sidoo kale leedahay mid ka mid ah jaaliyadaha ugu waaweyn Spain iyo adduunka intiisa kale, oo sidoo kale ka shaqeeya dibedda.
Badoo waxay leedahay hanaan xaqiijin oo saddex-tallaabo ah taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad la fal gasho astaamaha la xaqiijiyay, marka lagu daro kooxda waxay tirtiraysaa astaamahaas isku dayaya inay ka faa'iideystaan ​​bulshada. Waa mid ka mid ah aaladaha shukaansiga ee ugu dhameystiran, adigoo qayb ka mid ah bilaash ah, in kasta oo aad ku gaartid qoraalada qaarkood waa inaad lacag bixisaa.
Habka caymiska ee Badoo wuxuu kaa dhigayaa inaad ka korto dadka kale, waxaad si toos ah ula sheekaysataa dadka iyo xulashooyinka kale ee gaarka u ah adeegga. Badoo wuxuu dhaafayaa 100 milyan oo soo dejin ah oo ku yaal Play Store, ahaanshaha mid ka mid ah kuwa ugu cadcad bulshada Latino iyo adduunka intiisa kale.
Badoo - Wada sheekeyso, shukaansiga iyo shukaansiga
Bumble waa wax badan oo la mid ah Tinder, maaddaama ay tahay codsi aad xiriir la leedahay, laakiin gabadha waa inay qaaddaa tallaabada ugu horreysa ee ay ku aqbasho wadahadalka. Qalabku wuxuu bixiyaa adeeg bilaash ah, laakiin wuu ku xaddidan yahay haysashada qaybta Premium ee dhowr euro bishiiba si aad u hesho xulashooyin dheeri ah oo dheeri ah.
Qaab cajaa’ib leh ayaa ku jira nashqadeynta, bey'addu waa mid saaxiibtinimo leh oo si fudud loo isticmaali karo, qaasatan iyadoo si toos ah loogu diro farriimo qofka aad hiwaayadaha la wadaagtaan iyo waxyaabaha ay iska midka yihiin Bumble wuxuu ku sii kordhayaa bulshada Hispanic. Waxay gaaraysaa 10 milyan oo laga soo dejisan karo Android.
Bumble - Shukaansi, Saaxiibbo iyo Xiriir
Developer: Bumble Holding Xaddidan
Waa ikhtiyaar aad u fiican, oo ah bedelka ugu fiican ee Ginder haddii aad tahay Premium, maaddaama xulashooyinka lagu furay rukumo qaddar go'an bishiiba. Meetic waa bogga xiriirka ugu fiican, halkaas oo aad dadka ugu biiri doontid isir ahaan, xulashada koox dad ah iyo inaad qaar kula kulantid wadahadal gaar ah.
Da'da caadiga ah waxay u dhaxeysaa 30 ilaa 40 sano jir, in kastoo waxbadan ay ku kala duwan yihiin, maadaama ay jiraan kuwa badan oo hada ku jira adeegan caanka ah. Meetic wuxuu ku jiray ganacsi muddo dheer, aad iyo aad ayey u shaqeyneysay sidii goob shukaansi tan iyo 2001.
Astaamaha ayaa ah 100% dhab ah, waxaa jira xaqiijin si loo diiwaangeliyo, maadaama aad dooneysid dhab ahaan iyo wixii ka sarreeya dhammaan dadka xushmadda leh si aad u raacdo. Meetic waa bog 100% lagu kalsoonaan karo, aad iyo aad ayey u heshay ixtiraamka waqtiga ay ku shaqeyneysay oo ay xukunka haysay. Waxay ka badan tahay 5 milyan oo laga soo dejisto barnaamijka Android, laakiin guushiisu way sii socotaa iyada oo ay ugu wacan tahay websaydhka malaayiin qof ay helaan.
Meetic - Shukaansiga lamaanaha
Kalluun badan (POF)
Waa mid ka mid ah beddelaadaha waaweyn ee loo yaqaan 'Tinder', maaddaama ay leedahay in ka badan 70 milyan oo isticmaale isla markaana waqti ka dib ay iskeed isu taagtay inay tahay ikhtiyaar weyn oo lagula kulmo dadka. Waxay leedahay nooc bilaash ah, laakiin sida dhammaan noocyada 'Premium' waxay ku dareysaa waxyaabo badan oo xiiso leh.
Ikhtiyaarrada kala duwan ee muuqaalka ayaa fiiqaysa ujeeddada si loola kulmo qofkaas annaga nala xiriira, sidaa darteed way wanaagsan tahay in la dhigo xogtaas muhiimka u ah, gaar ahaan dhadhanka iyo hiwaayadaha. Kalluun badan, oo loo yaqaan POF, waa mid ka mid ah codsiyada leh qiimeynta ugu sareysa ee isticmaalayaasha, ku guuleysiga 3,7 5tii dhibic.
POF wuxuu ku dhaafaa 50 milyan oo soo degsiimo ah Android, laakiin on iOS waxay leedahay in ka badan kala badh, iyo sidoo kale degel si dhakhso leh wax loogu helo, dhammaantoodna leh diiwaangelin gaaban. POF waxaa la sameeyay 2003, isagoo ka mid ah adeegyada jirsada 18 sano jir dhawaana cusbooneysiiyay naqshadeeda.
POF shukaansi site
Waa codsi dhammaystiran inaad kula kulanto dadka kugu xeeran, gaar ahaan dadkaas aad aragtay oo aad adeegsatay arjiga Happn. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad "Sida" u aragto sawirrada aad aragto, oo dhammaantood ay la socdaan macluumaadka, waa qodob muhiim ah haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato qofka.
Hawlgalka Happn wuxuu la mid yahay Tinder, isagoo ah wax ka badan beddel, ikhtiyaar xiiso leh oo lagu heli karo ballamo bey'adda ugu dhow. Ku dar nooc bilaash ah oo xaddidan, laakiin sida dadka kaleba, Happn way fiicantahay hadaad aado Premium.
Abka Happn ayaa kuu sheegi doona haddii aad ka gudubtay ama aad ka gudubtay isla aagga qofkaas, dhammaantood illaa inta ay leeyihiin xiriir wada hadal oo dhow, laakiin aan tusin goobta. Waqti ka dib si la yaab leh ayey u soo hagaagtay, si aad u badan oo ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo Play Store oo leh 50 milyan oo soo degsasho ah.
Doonaya inaad raadsato ballan waqti yar oo ka mid ah codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay waa JACAYL, oo ay yaqaanaan dad badan oo ku hadla Isbaanishka. JACAYL waxaa lagu yaqaan inuu yahay barnaamijka ugufiican ee lagu helo qofkaas oo dhadhankiisa oo kale ah, isagoo buuxinaya foom kahor intaadan isticmaalin.
Waxay ku weydiin doontaa diiwaangelin kooban oo ku saabsan dheecaanka, iyada oo muhiim u ah in la dhigo wax kasta oo aad jeceshahay aad u badan haddii aad rabto inaad ku tusi karto dhammaan dadka adiga kuugu eg. JACAYLku wuxuu raadinayaa haasaawaha waqti xaddidan ama xiriir culus, tan waa inaad u cadaataa oo aad gelisaa miirayaasha qalabka.
Iyadoo in ka badan 50 milyan oo isticmaaleyaal ah, JACAYL ku dar nooc bilaash ah oo leh xaddidaadyo qaar, iyo sidoo kale nooc lacag la siiyay oo furaya dhammaan xulashooyinka. JACAYL waqti ka dib ayaa isu aasaasay inay tahay codsi kaamil ah si loo helo qofkaas aad wax badan raadineysay.
JACAYL - La sheekeyso Kali
Waplog wuxuu ku faanaa mid ka mid ah bulshada ugu koritaanka badan, oo leh 90 milyan oo isticmaale, labadaba bogga ugu weyn iyo barnaamijyada Android iyo iOS. Websaydhka iyo barnaamijyadu waxay u baahan yihiin diiwaangelin kooban, marka lagu daro bixinta macluumaadka si ay awood ugu yeeshaan inay la sheekaystaan ​​dadka meel kasta oo meeraha ka mid ah.
Codsiga Waplog wuxuu ku siinayaa inaad sameysid isboorti, ciyaaro fiican iyo inaad si toos ah ula sheekaysato dadka aad isku fikirka ah, sidaas darteed waxaad fursad siinaysa inaad la hadasho hal ama in ka badan isla waqtigaas. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah inuu awood u yeesho inuu qabto shir fiidiyoow ah ka hor inta uusan kugu arkin fool ka fool inta ay isku dal ka soo jeedaan.
Waplog: Shukaansi, Sheeko & Helitaan
Developer: Barnaamijyada shukaansi Waplog
Joyride - Kulan, Wadahadal iyo Ciyaar
Waa codsi ka duwan kuwa kale, maadaama aad heli karto taariikh la ciyaaro, markaa xulashada magaca "Joyride". Joyride ayaa ku weydiin doonta sawir, waxay ku xirnaan doontaa guusha kulamada, hadda waa mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad ka hesho sawir kasta oo aad ku soo dejiso goobta.
Haddii aad ka daashay raadinta barnaamij shukaansi caajis ah, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee lagula kulmayo dadka ciyaara, hadey tahay jinsi ka duwan ama isku mid. Joyride wuxuu leeyahay 4,5 5tii dhibicood, qoraal muhiim ah oo sare oo ay tahay in loo tixgeliyo inuu yahay mid muhiim ah. In kabadan 10 milyan oo laga soo dejisto Android.
CSL - Wadahadal. Ciyaar. Taariikh
Waa codsi loo arko inuu bilaash yahay, helitaanka dhammaan dadka doonaya inay la kulmaan dadka oo sidaas sameeya iyadoon wax lacag ah laga bixin nooca Premium. Way qumman tahay haddii aad raadineyso taariikh maalin cayiman, inkasta oo ay tahay inaad bilowdo soo saarista wada hadallo ku saabsan inaad dooneyso inaad kasbato kalsoonida dadka.
JAUMO waa qalab aamin ah, wuxuu isku xirayaa xannibaadda amniga kuwa suuragalka ah inay sameeyaan SPAM iyo sidoo kale kuwa aadan bilaabin inaad jeceshahay marka hore. Muunad kali la xaqiijiyay, oo ka tagaysa qoraallo been abuur ah oo doonaya inay helaan macluumaadka isticmaalaha.
Sida dhammaantood, JAUMO waxay isku daraysaa aag Premium ah inay wax walba lahaadaan iyadoon xaddid lahayn, iyagoo siinaya malaayiin isticmaaleyaasheeda fursado badan oo dheeri ah. JAUMO waxay hadda maamushaa in ka badan 50 milyan oo soo degsasho ah, iyada oo beddel weyn u ah Tinder.
JAUMO shukaansi: Chat.Flirt.Ligar
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Beddelka ugu wanaagsan ee loo maro Tinder ee 2021